Sangano rePrayer Network Zimbabwe Rinotanga Kutsanya neKunamatira Sarudzo Dzisina Mhirizhonga
Nhengo dzePrayer Network Zimbabwe dzichifora muHarare dzakatungamirirwa naVaJacob Ngarivhume veTransform Zimbabwe
Nhengo dzesangano rePrayer Network Zimbabwe nemusi weMuvhuro dzakatanga hurongwa hwemazuva makumi mana hwekutsanya pamwe nekunamatira sarudzo dzegore rinouya kuti dzisave nemhirizhonga, uye kuti mapato achakwikwidza musarudzo idzi asarudze vanhu vanotya Mwari muzvinzvimbo.
Sachigaro wesangano iri, VaKudakwashe Makuwe vanoti sezvo mhirizhonga ichi nyanyokonzerwa nevemapato ezvematongerwo enyika, vachaedza napose pavanogona kuti vashande nemapato ose ezvematongerwo enyika anosanganisira makuru akaita seZanu PF neMDC.
"Chimwe chezvinhu zvatakanzwisisa ndechekuti you know, kuti ma election afambe zvakanaka zvinoda kupindira kwaMwari. Tiri kunamata against violence muma election. Then chechipiri, hatisi kuda zvakare ma disputed results, saka tiri kunamata kuti no, ngaparege kuva nenyaya dzinotaura zveku rigger kana kuita sei," VaMakuwe vanodaro.
Vanotiwo sesangano, vanofara chose vakatotanga kare kushanda nemubatanidzwa wemapato anopikisa weMDC Alliance mukuedza kuti vasvitse shoko ravo resarudzo dzisina mhirizhonga.
Sangano rePrayer Netwrok Zimbabwe rakaumbwa muna 2010 nemakereke akasiyanasiyana kuitira kunamatira nyika kuti ibve mumatambudziko mairi.
VaMakuwe vanoti vanhu vachange vachinamata kubva mangwanani kusvika nenguva dza 4 dzemasikati, uye vanenge vasingadye.
Hurukuro naVaKudakwashe Makuwe